Chii chinonzi Blockchain Technology? | Martech Zone
Tarisa kubhiri remadhora, uye uchawana serial nhamba. Pane cheki, iwe unowana yekufambisa uye nhamba yeakaundi. Kadhi rako rechikwereti rine kadhi rechikwereti nhamba. Idzo nhamba dzinoiswa mukati medzimwe nzvimbo kumwe kunhu - kungave mune dhatabhesi yehurumende kana system yebhangi. Sezvo iwe paunotarisa dhora, iwe hauzive kuti nhoroondo yaro chii hazvo. Pamwe zvakabiwa, kana pamwe ikopi yekunyepedzera. Zvakaipisisa, kutonga kwepakati kwedata kunogona kushungurudzwa nekudhinda zvimwe, kuba, kana kushandisa mari - kazhinji zvichikonzera kudzikisira mari yese.
Ko kana… mune rese dhiri bhiri, cheki, kana kiredhiti kiredhiti, paive paine makiyi akavharirwa ayo aigona kushandiswa kuwana mukana kune zvinyorwa zvezviitwa Chikamu chimwe nechimwe chemari chinogona kusimbiswa zvakazvimiririra kuburikidza nehukuru network yemakomputa - hapana nzvimbo imwechete ine data rese. Iyo nhoroondo inogona kuburitswa kuburikidza kuchera iyo data chero nguva, kune network yemaseva. Chikamu chega chega chemari uye kutengeserana kwega kwega nacho kunogona kusimbiswa kuti vaone kuti ndeyani, kwayakabva, kuti ndeyechokwadi, uye kunyangwe kurekodha chinoteedzana chinotevera kana chikashandiswa mukutengesa kutsva.
Iyo blockchain ndeye yakatemerwa ledger ledger yezvese zviitiko mukati pezera-kune-peer network. Uchishandisa tekinoroji iyi, vatori vechikamu vanogona kusimbisa kutengeserana pasina kudikanwa kwechiremera chepakati chekusimbisa Zvimwe zvinogona kunyorera zvinosanganisira kuchinjisa mari, kutengesa maitirwo, kuvhota, uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa
Blockchain ndiyo tekinoroji yepasi iri kugonesa cryptocurrency senge Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, NEM, Ethereum, Monero, uye Zcash. Iyi infographic kubva kuPWC inopa yakajeka tarisiro ye blockchain tekinoroji, mashandiro ayo, uye ndeapi maindasitiri anogona kukanganiswa nawo.
Nepo paine toni yehope yakatenderedza Bitcoin izvozvi, ini ndinokukurudzira iwe kuti ufuratire dzakawanda dzenyaya uye tarisa pane iri pasi tekinoroji. Vakawandisa vasina kudzidza, vasiri-tekinoroji vanofananidza Bitcoin nekumhanyisa kwegoridhe, kana bhowa remasheya, kana kunyangwe fadhi chete. Dzese idzi tsananguro uye zvinotarisirwa zvakanyanyisa. Bitcoin yakafanana nechero imwe mari yakambogadzirwa, nekuda kweye blockchain tekinoroji. Blockchain tekinoroji yakaoma iyo inoda simba rekomputa sezvatisina kumboida kare. Chinhu chekutanga kuchera transaction inogona kuda makumi ezviuru zvemadhora mumidziyo, inodhura makumi emadhora, shandisa yakawanda simba, uye inoda maminetsi kana maawa ebasa.
Izvo zvakati, fungidzira nyika ine yako dhijitari chitupa inovimbwa nekuti ine makiyi enhoroondo yemakirasi ese awakatora akasimbiswa kuburikidza nevezera rako ... pasina iwe kushevedza setifiketi yakasimba. Nyika iyo iwe yausingade kuti utarise nemaoko bhizinesi nhoroondo asi inogona, pachinzvimbo, kuongorora iro basa ravakaita sekutsanangurwa kwavo blockchain-inofambiswa chibvumirano chekutengesa. Kushambadzira kunogona kuchengetedza nhoroondo yechiratidziro chayo uye mutengesi kune munhu anodzvanya kuti uone kuti haisi yekunyepedzera kubaya.
Blockchain tekinoroji inovimbisa iyo inogona kuiswa chero kupi zvako. Ndinotarisira kuona zvinotevera!
Tags: kushambadzablockchainkutaura kuti ichokwadicryptocurrencyledgerkucheramutengapwechivimbo chakasimba
Nhau dze360: Gadzira, Gadzirisa uye Shambadza Yako 360˚ Campaign yeVhidhiyo
Zvita 12, 2017 na2: 06 PM
Chinyorwa Chikuru. Chaizvoizvo yakanyatso kutaurwa primer paBlockChain ini ndaona kudhara! Ndatenda!
Iyo AD Shizha
Dec 13, 2017 pa 11: 58 AM
Zvakanyatsoiswa. Ndatenda nekuisa izvi zvakanyatso taurwa.